४ जहाज ग्राउन्डेड गराएर निगमका पाइलटद्वारा अमेरिकाबाट बार्गेनिङ - कारोबार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
समुन्द्रा घिमिरे काठमाडौं बैशाख १२
निगमका पाइलट आङनुरी शेर्पा
मासिक ४ लाखबाट केही समयमै ७ लाख पुर्याएका आङनुरी शेर्पाले पछिल्लो समय मासिक १० लाख बुझ्दै आएका छन्। अमेरिकामै बसेर अहिले उनी मासिक १८ लाख दिएमात्र नेपाल फर्केने बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। जहाज ग्राउण्डेड गराएर उनले तलबमा यसरी बार्गेनिङ गरेको यो १७ औं पटक हो।
नेपाल वायु सेवा निगमसँग रहेका ४ वटा वाई–१२ जहाजका एक मात्र प्रशिक्षक पाइलट हुन्- आङनुरी शेर्पा।
सधैँजसो चिनियाँ जहाज ग्राउन्डेड भनेर समाचार शीर्षक बन्नुमा व्यवस्थापकीय कमजोरीपछि अर्को कारण उनी देखिएका छन्। हाल अमेरिकामा रहेका शेर्पा वाई–१२ जहाजका लागि अन्य पाइलटका पनि प्रशिक्षक पाइलट हुन्।
चिनियाँ जहाज ग्राउन्डेड भइरहनुमा पाइलट 'फ्याक्टर'को यो कथा ५ वर्षअघि सुरु हुन्छ।
नेपाल वायुसेवा निगमले वाई–१२ जहाजका तीन पाइलटलाई प्रशिक्षक ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ तालिमको अनुमतिका लागि २०७१ असोज २३ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) सँग अनुमति माग्यो।
क्यानले २०७१ मंसिर ९ मा वाई–१२ का तीनै जना पाइलटलाई उक्त तालिममा पठाउन अनुमति दियो। त्यतिबेला निगमले तीनै जना पाइटललाई आफ्नै खर्चमा ४५ दिनको सुरुवाती चरणको तालिममा पठाएको थियो। उक्त तालिम लिनेमा पाइटल आङनुरी शेर्पा, सञ्जय बादे र नृपेन्द्र भट्टराई थिए।
प्रारम्भिक तालिम सकेर फर्किएपछि उनीहरु तीनै जनालाई प्रशिक्षक पाइलट (आइपी) को तालिम लागि अमेरिका पठाउन सिफारिश गरियो। निगमको सिफारिश तत्कालै क्यानले अनुमोदन गर्यो।
शेर्पा मात्र प्रशिक्षक पाइलटको तालिममा कसरी परे?
उडान समयको आधारमा बादे पहिलो, भट्टराई दोस्रो र शेर्पा तेस्रो स्थानमा थिए। नाम सिफारिश गरेको झन्डै एक वर्षसम्म निगमले कसैलाई पनि प्रशिक्षक तालिममा पठाएन। वर्ष दिन बित्नै लाग्दा शेर्पा मात्र तालिमका लागि सुटुक्क अमेरिका उडे। त्यो पनि निगम व्यवस्थापनको अनुमितबिना। उनलाई अमेरिका पठाउन अप्रेसन विभागका निर्देशक रबिन्द्रकुमार शेरचनको मुख्य भूमिका रहेको स्रोतहरुको दाबी छ।
नेपाल वायु सेवा निगमको चिनियाँ जहाज वाई–१२ इ
प्रशासनको स्वीकृतिबिनै रातारात एक जना मात्र पाइलट तालिमका लागि विदेश उडेको विषय त्यतिबेला पनि विवादित बन्यो। सबैभन्दा कम समय उडान गरेका शेर्पा व्यवस्थापन अनुमितबिनै तालिममा विदेश गएको विषयप्रति निगमका अन्य पाइलटहरुले आपत्ति जनाए। विरोधस्वरुप उनीहरु बिदामै बसे।
घातक विषय यो रह्यो कि ३ जनामध्ये शेर्पालाई मात्र प्रशिक्षक पाइलट तालिमका पठाइनु चिनियाँ जहाज वाइ-१२ को ग्राउन्डेडको मुख्य कारण बन्यो। उनले आफू विशेष जनशक्ति भएको भन्दै तलब बढाउन बार्गेनिङ थाले।
प्रशिक्षक तालिम सकेर फर्किएका उनले आफू अमेरिकी नागरिक भएको खुलाए। यसको खास अर्थ थियो। उनले तबल बढाउन माग गरेका थिए।
निगमले उनीसँग त्यसको प्रमाण माग्यो। उनले बुझाउन अस्वीकार गरे। त्यही बेला सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विदेशी ग्रीनकार्ड, पिआरधारी सरकारी कर्मचारीलाई सेवामा नराख्ने ऐन बनाएपछि शेर्पा बर्खास्तीमा परे। लगत्तै निगम सञ्चालक समितिले २०७४ जेठ २१ मा वाई–१२ प्रशिक्षक पाइलट (आइपी) शेर्पालाई विदेशी नागरिक भएको भन्दै सेवाबाट हटायो। तर यो निर्णय धेरै समय टिकेन। लगत्तै निगमले अर्को निर्णय गर्यो। जुन निर्णयद्वारा उनको पुनः करार नियुक्ति गरियो। शेर्पा निगमका निर्विकल्प जनशक्ति रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सेवा सुविधा पनि बढाइयो।
१ लाख ८० हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका उनको तलब बर्खास्तपछिको नियुक्तिमा ४ लाख पुग्यो। यो नियुक्तिको मुख्य कारक चिनियाँ वाई–१२ जहाजको एक मात्र प्रशिक्षक पाइलट हुनु नै थियो। उनी बाहेक कसैलाई निगमले प्रशिक्षक पाइलट तालिम दिएकै थिएन।
पाइलट शेर्पा २०७४ माघ १५ मा अमेरिका लागे। व्यवस्थापनलाई जानकारी दिएनन्। त्यहाँ पुगेर उनले फेरि तलब बार्गेनिङ गरे। ५ महिनासम्म अमेरिका बसेर निगम व्यवस्थापनसँग तलब बार्गेनिङ गरेका उनले आफ्नो तलब ७ लाख पुर्याए। फर्किएपछि अमेरिका बसेको ५ महिनाको तलब समेत बुझे। यो बीचमा चिनियाँ वाई–१२ जहाज विमानस्थ ग्राउन्डेड भइरहे भए।
याे पनि: प्रशिक्षक पाइलट अमेरिका लागेपछि चिनियाँ जहाजको उडान झनै अनिश्चित
२०७४ मा शेर्पा वाई–१२ जहाजको पीपीसी नवीकरणका लागि चीन गए। फर्किएपछि उनले वाई–१२ का २ पाइलटको पीपीसी नवीकरण गरिदिन सक्थे तर उनी अमेरिका उडे। निगमले फेरि थप आर्थिक भार व्यहोर्दै दुई पाइलटहरुलाई पीपीसी नवीकरण गर्न चीन पठायो।
अमेरिकाबाट तलब बार्गेनिङ
शेर्पालाई पुनः निगम भित्र्याउनमा निगमका ओडी अप्रेसनल इन्जार्च रबिन्द्रकुमार शेरचनको भूमिका रहेको निगम अधिकारीहरु बताउँछन्।
मासिक ४ लाख तलबमा करार नियुक्ति पाएका शेर्पाको तलब सुविधा त्यस लगत्तै ७ लाख पुग्यो। उनले राम्रो काम गरेबापत तलब बढेको भने थिएन। अमेरिका पुगेर तलब बार्गेनिङ गर्न थालेपछि निगम बाध्य भएर ७ लाख तलब पुर्याएको थियो।
पछिल्लो समय उनले अन्य सुविधा बाहेक मासिक १० लाख (कर बाहेक) तलब बुझ्दै आएका छन्।
२०७१ साल भदौ ११ गते निगमको सेवामा प्रवेश गरेका शेर्पाले त्यसयता १७ पटक तलब बार्गेनिङ गरेको स्रोतहरु बताउँछन्। अहिले फेरि उनी अमेरिकै पुगेका छन्। उतैबाट तलब बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। हाल १० लाख तलबमा काम गरिरहेका उनले निगमसँग १८ लाख मासिक तलब माग गरिरहेका छन्। उनले भने जति तलब दिए फर्किने नत्र उतै बस्ने भनेर बार्गेनिङ गरिरहेका छन्।
निगमका ओडी शेरचन १५ लाखसम्म भए पनि दिएर उनलाई नेपाल ल्याउने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ। कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल उनलाइ हटाएर नयाँ प्रशिक्षक पाइलट तयार पार्ने पक्षमा छन्। खरेल यसअघि महाप्रबन्धक हुँदाका बखत निगमले चिनियाँ जहाज भित्र्याएको हो।
प्रकाशित १२ बैशाख २०७६, बिहिबार | 2019-04-25 18:11:46
ट्याक्सी भाडा बढ्यो, प्रिन्टर मेसिन अनिवार्य
सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने ट्याक्सी भाडा वृद्धि भएको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले भाडा समायोजन गर्दै मूल्यवृद्धि गरेको हो।
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड र नोबेल हस्पिटलबीच उपचारमा छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको छ।
पर्सा मालपोत कार्यालयमा वाणिज्य बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर
राजस्व विभाग प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएकोबारे संसदमा अर्थमन्त्रीले दिए स्पष्टीकरण
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व असुलीमा सदाचारिता कायम राख्न राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको...
सांसद मोदीको अवरोधले विराटनगरमा ‘फोर्स लोडसेडिङ’ हुनसक्ने
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद अमनलाल मोदीले तार तान्न अवरोध पुर्याएकाले विराटनगर औधोगिक क्षेत्रमा ‘फोर्स लोडसेडिङ’ हुनसक्ने नेपाल विद्युत...